इन्यूजकभर सञ्चालनमा | चितवन पोष्ट
नारायणगढ । अंग्रेजी पाठकहरुलाई ध्यान दिएर यहाँबाट अंग्रेजी भाषामा अनलाइन न्यूज साइट सञ्चालनमा आएको छ । अनलाइन समाचार ‘इन्यूजकभर’ को शनिबार एक अनलाइन कार्यक्रमकाबीच भेट टाइम्स मासिकका सहसम्पादक श्रीकृष्ण तिमिल्सिनाले समाचार साइटमा समाचार अपलोड गरेर उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
‘एउटा पूर्ण समाचार साइट’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालनमा आएको वेभसाइटमा निकट भविष्यमा नेपाली समाचारसमेत पढ्न पाइने इन्युजकभरका व्यवस्थापक डा. आदर्श प्रधानले जानकारी दिनुभयो । साइट विगत दुई हप्तादेखि परीक्षणात्मक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो ।
चितवन, काठमाडौँ, र दोलखाका युवा पत्रकारहरुको सहकार्यमा सञ्चालित साइटमा देशभरका युवा पत्रकारहरुलाई समावेस गर्दै अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको प्रधानले जानकारी दिनुभयो । वेवसाइटको आइटी प्रमुख रवि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । उद्घाटन कार्यक्रम साइटका व्यवस्थापक डा. प्रधानको अध्यक्षतामा भएको थियो ।